galmudugnews.com » Rag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 !
Home » WARARKA » Rag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! Rag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! admin on
Mar 15th, 2013 //
No Comment Views 1620846Farah Topaz oo ku dhaartay burburinta Shirkadaha Hawiye- Nin reer Aw Xasana oo Somtel South Somalia loo dhiibay.
Ganacsato iyo Siyaasiyiin u dhashay beelweynta Hawiye ayaa Wasiirka Madaxtooyadda Somalia Farah Abdulkadir ugu maahmaahay BAQASHII FARDA LA DAAQ TAGTO FARASBEEY IS MOODAA.
Maahmaahdaan ayaa ka dhalatay dareen la xiriira Wasiirka Madaxtooyadda oo ku dhaartay inuu burburin doono guud ahaan Shirkadaha Isgaarsiinta Ganacsatada beelweynta Hawiye ee ka jira Koofurta Somalia.
Farah Topaz oo Dubai heshiis kula galay wiil uu dhalay Ganacsade Dhiigshiil oo lagu magacaabo Abdirashiid Mohamed Ducale ayaa la sheegay inuu bartilmaameedkiisu yahay dhibaateeynta Shirkadaha Hormuud Telecom iyo Nationlink Telecom.
Nin u dhashay qabiilka reer Aw Xasan oo lagu magacaabo Ahmed Sheekh Cali Galool ayaa laga dhigay Maamulaha Shirkadda Isgaarsiinta Somtel ee Koofurta Somalia.
Ninkaan waxaa hoowlaha Shirkadda la wadayo sagaal iyo toban nin oo qabiilka Reer Aw Xasan u dhashay .
Heshiiska dhexmaray Abdiraashiid Dhiigshiil iyo Farah Topaz wuxuu dhigayaa IN FARAX LAGA DOONAYO IN UU SHIRKADDA SIIYO FURAHA SOMALIYA,SHIRKADAHA KALENA LAGU CADAADIYO OGOLAASHAHA LAYSINKA IYO IN CANSHUUR BADAN LA SAARO FURAHA SI ADEEGOODO QAALI U NOQDO OO AY LA TARTAMI WAAYAAN SHIRKADAAN CUSUB.
Qabiilka reer Aw Xasan waxay sheegeen inaysan u dhalan Sheekhaal oo ay yihiin Asharaaf saamiga la qaata Digil iyo Mirifle.
Farah Topaz ,Cumar Dahir iyo Ahmed Galool rag ay ka mid yihiin ayaa dhaqankooda la moodaa inay Cadaawad fog u maleegayaan beesha Reer Aw Xasan.
Xeeldheerayaasha ku wanaagsan Saadaashu waxay leeyihiin Ragga reer Aw Xasan ee Siyaasadda ku lugta leh waxay qabiilkooda gaarsiin doonaan in lala beegsado xasuuq la mida kii Gaalgaale lagula kacay.
Gaalgale oo ahaa qabiil tira yar waxay ku kaceen gabood falo iyagoo adeegsanayay Xukumadii Mohamed Siyaad ,maantana dhaqanka ragga reer Aw Xasan waxba kama duwana dhaqankii Gaalgalo ee sanadkii 1988-1990.
Nin ka mida Siyaasiyiinta waaweyn ee Hawiye ayaa yiri “REER AW XASAN KALWEYNE HALOO SHEEGO HAWIYE MAAHA KUWA KIBIR QOOQA LOOLA TAGO,WAXAANA HUBAA IN LA GAARI DOONO MAALIN MAGACA REER AW XASAN LAGU DIIMO,OO KOOFURTA LAGA WAAYO SIDII GAALGALO KU DHACDAY HADAAN LAGA FIIRSAN KIBIR QOOQA FARAH TOPAZ IYO GALOOL”
Oday dhaqameed u dhashay beesha Hawiye ayaa isagana yiri “NINKI BARBAARSHO BAHAL NOOL KA BAXSAY AMA BOQNA GOOY ayaan leenahay Xasan Garguurte,sida la iskaga celshana waa naqaan Ragaan Asharaafta sheegtay ee dulmiga la saaxiibkaa”
Ganacsade diiday in magaciisa la xigtana wuxuu yiri “HADAAD KA GUURTAY GEEDI XEEYR,GAROWE GOOF MAKUUGU YAAL ayaan leeyahay Reer Aw Xasan ragga u dhashay ee hada ASHARAAFTA NOQDAY”
Qabiilka Gaalgalaha waxay sheegteen inay Nuux Ismaaciil yihiin markii masiibada ku dhaceysay,waxayna bilaabeen inay dadka laayaan,tuulooyin badan gubaan,danuub oo dhan ku kacaan.
Si kastaba ha ahaatee,waxaanu eegeeynaa Reer Aw Xasan halka uu dulmigooda ku dhamaado.waxaana xusid mudan inaysan maanta joogin xilligii uu habaarkooda kacay ee Ahludiinka ahaayeen.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139617 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31895 hitsContact US - 30622 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26182 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25653 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25300 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23908 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23069 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22432 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22381 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21479 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21149 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21144 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20846 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19892 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19884 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19286 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18521 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17828 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17769 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17695 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16911 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16846 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15548 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15499 hits Home Contact US